Tselatra · Janoary, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Tselatra · Janoary, 2008
Tantara tamin'ny Tselatra tamin'ny Janoary, 2008
Ahoana moa ny mba ao an'eritreritry ny vehivavy iray raha nanoratra ny fomba fampiasa amin'ny lafiny ratsy ny SMS izy ao Kenya: “Raha jerena ny fiakaran'ny herisetra ao Kenya, ny mpitondra tenin'ny vokovoko sy ny saritsinambolana mena ao Kenya, Atoa Bernard Barret no noheverina ho niteny fa ny fampiasana ny soratra hafatra fohy amin'ny alalan'ny finday (SMS) milaza mialoha ny mety hisian'ny fanafihana avy amina vondrona iray na hafa no mampiely haingana ny tsaho ary izany toe-javatra izany no mampiakatra haingana ny tosi-drà mampafana ny raharaha.”
“Raha tianao ho fantatra izay hitranga amin'ny faritry Amazonia (miaraka amin'ny renirano) raha mbola tsy atsahatra izao fandripahan'ala izao dia azonao jerena ny fivoarany amin'ny alalan'ny fanandramana hitsinjo mialoha nataon'ny Institute of Environmental Research (na sampan-draharaham-pikarohana momba ny tontolo iainana) miorina any Amazonia, miaraka amin'ny Federal University of Minas Gerais (Oniversite federalin'i Minas Gerais) ary ny The Woods Hole Research Center( foibem-pikarohana Ny Alan'i Hole)”. Jereo ny rohy ao amin'ny Blog do Sakamoto [pt].
Raha saiky amin'ny teny anglisy na rosiana avokoa ny ankamaroan'ny bolongana miresaka na nosoratana Armeniana dia hafaliana tsy omby tratra kosa ny an'i The Armenian Observer raha nahatsikaritra fa na dia mandeha tsikelikely aza dia hita tsara ny fitomboan'ireo bolongana mivoaka amin'ny teny Armeniana. Mamporisika ary Observer hijery ny fahatsarany ka hamaky azy ireny tsy tapaka sady hametrak'hevitra ihany koa (hampazoto ny mpanoratra ireny bolongana ireny).
Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Blogrel no manome ny heviny mikasika ilay fanimbazimbana nisy nanao omaly tany an-tanànan'i Cardiff tamin'ny mariky ny hazofijaliana najoro ho fahatsiarovana ireo Armeniana naripaka tamin'ny fotoan'androny. Nolazain'ny mpamaham-bolongana ary fa mahamenatra sady manamarika ny tsy fahatantesana ny fisian'ny Andro Fahatsiarovana ny Fandripahana nanjo ny Armeniana ary manantena izy mba tsy ho ny Tiorka no tafiditra lalina amin'ity raharaha ity.
Mpanoratra Adil Nurmakov Nandika Andriamifidisoa Zo
Filaharana fahadimy manerantany i Costa amin'ny fiarovana na fitsimbinana ny tontolo iainana manerantany nefa voalohany kosa raha any amin'ny Kaontinanta Amerikana, hoy ny tondro fijerena ny fiarovana ny tontolo iainana navoakan'ny Oniversite Yale sy Columbia. Nireharehan'i mpamaham-bolongana ao amin'ny Out of Costa Rica [es] io valin'ny fanadihadiana nijery ny politikan'ny firenena tsirairay amin'ny fitsimbinana ny tontolo iainana io
Nanomboka namoaka andian-dahatsoratra mikendry ny handika ho amin'ny teny paortiogey ny antontan-taratasy ofisialy (an'ny fanjakana) miresaka ny nanohanan'i Etazonia ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 1964 nitranga tany Brezila Luiz Carlos Azenha [pt], Amin'izao fotoana izao moa dia hita ao amin'ny tahirin-kevitry ny Sekoly Ambony momba ny fiarovam-pirenena George Washington no misy ireo antonta-taratasy ireo. Ao amin'ny lahatsorany faharoa no amoahany ny “ hafatra avy amin'ny masoivoho tany Brezila tamin'izany fotoana izany, ho an'ny lehibeny any Washington”.
Ity resaka ity dia tohin'ny lahatsoratra efa navoakan'ny namana Tomavana eo ambanimbany eo. Vaovao farany navoakan'ny tontolom-bolongana, Carlos Serra [pt] no nitatitra fa nahatsikaritra kamiao (fiarabe re a!) nitondra ankizy miisa 40 anelanelan'ny 7 ka hatramin'ny 11 taona niainga avy any Nampula, Mozambique ny polisy ao Inchope. Azo inoana fa nangalarina ireo zaza ireo. “ Ny fahalemen'ny rafi-panjakana sy ny rafi-piaraha-monina no manamora ny fanondranana an-tsokosoko sy ielezany amin'izao fotoana izao. Fanapahan-kevitra maro no tsy maintsy ilaina (ho fisorohana ity hala-jaza) ity ka tafiditra amin'izany ny fanankotrihana (na fanavaozana no teny fantatrao kokoa) ny fitsipiky ny heloka bevava (izay efa tamin'ny taona 1876) sy ny fametrahana mazava ny fanondranana an-tsokosoko (halajaza) ho anisan'ny heloka bevava”.
“Mahatratra 1 000 000 ankehitriny ny isan'ny Irakiana maty ‘voatifitra’ noho ny fibodoan'ny Etazonia ny taniny, saingy ireo (mpanao politika Amerikana) nankato ny fitsabahan'i Etazonia tany kosa na avy amin'ny “antoko ankavia” na avy amin'ny “antoko ankavanana” dia mbola mitady fialantsiny sy hevitra mandrakariva hanao izay hijanonana any Iràka” hoy Raed Jarrar avy any Iràka nanoratra.
“Tokony hanahy ve aho amin'ny fanaovana ny Islam ho toy ny zavatra mampandositra ny olona? Tsy maintsy hieritreritra ve aho fa mety hahatonga ny olona ho azo fidîna na tsia ny fivavahana arahina olona iray?” hoy ny nosoratan'i Subzero Blue avy any Tonizia, rehefa avy namaky ny voasoratry ny senatera Barack Obama namaly bontana (valim-panafihana) ny heverina fa lainga ataony momba ny finoana arahiny sy ny lalana politika nodiaviny.
Blogian no namoaka sary ahitana ny tsangambato najoro tany Bretainina lehibe tao Cardiff izay nisy nanimbazimba omaly. Tamin'ny fotoana hanomanana indrindra ny andro manokana ahatsiarovana ny fandripahana sy ho fanajana ilay mpanao gazety sy tonian-dahatsoratra Tiorka-Armeniana Hrant Dink nisy namono herintaona lasa izay tamin'ity volana ity tany Istanbul no nisy nanaisotra ny lakroa nipetaka tamin'io tsangambato io.
Melohin'ny mpamaham-bolongana Palestiniana Haitham Sabbah ny Bloggies 2008 ho tsy nampiditra ny bolongan'ny faritra Azia andrefana (Atsinanana akaiky ho an'ny tandrefana izay fijery arahin'ny be sy ny maro amin'ny ankapobeny na dia avaratry Madagasikara tsotra izao aza io faritra io: soratry ny mpandika ny anaty fononteny) mba ho afa-mifaninana amin'ny sokajy misy azy amin'ity taona ity (niaraka tamin'ny faritra Afrika izy teo aloha).
Shina: fitohanan'ny fiaran-dalam-by
Noho ny firotsahan'ny ranomandry be loatra any Hunan dia voatohintohina aok'izany ny fifamoivoizan'ny fiaran-dalam-by. Azo jerena ao amin'ny 56.com (zh) ny toe-draharaha ao Guangzhou. Nahazo ny lahatsoratra avy amina mpanao gazety manan-daza iray ny Inmediahk.net, izay nampivoitra fa efa niainana nandritra ny 20 taona farany ity olan'ny fifamoivoizana eo ampiandrasana ny fetin'ny lohataona (fitsimohan'ny zavamananaina) ity. Nanampy trotraka ny olana efa nihatra no nataon'ity “loza” voajanahary ity.
Indro omen'i Ali Mostofi ao amin'ny Iranian.com blog antsika ny rohy amina lahatsoratra iray mikasika ny fifampiraharahana ara-barotra misy eo amin'i Etazonia sy Iran ary Syria.Ampian'ny mpamaham-bolongana moa fa raha nitodika tao amin'ny toe-draharaha anatiny i Etazonia, fa tsy niherikerika ivelan'ny firenena, dia efa ela no nivaha ny olana momba ny Seyyeds[mpitondra fivavahana silamo].
Honduras: Iharana sy vavolombelona famonoana olona
Mbola lohahevitra mafotaka any Honduras amin'izao fotoana izao ny resaka famonoana olona (na heloka bevava), vao nisy mpamaham-bolongana roa indray manko no tratran'ny fanafihana ary nahita maso ihany koa ny fandrobana nampihoro-koditra. Aaron Ortiz ao amin'ny Pensieve [es] ohatra dia voaroba tany amin'ny faritra heverina ho voaro indrindra amin'ny resaka fandriampahalemana sady lalana fizorany isan'andro ny valiziny sy ny solosaina findainy raha hody izy. Fabo Balsech ao amin'ny Diario de un Joven en Medio de la Nada [es] indray dia voasariky ny fahitana lehilahy maromaro miaraka amin'ny fitaovam-piadiana nandroba vehivavy mbola tao anaty fiara teo anoloan'ny Oniversite tany an-toerana indrindra.
Zavatra mampihomehy mampalahelo no hitan'i Aaron avy any Sodana ka zarainy amintsika ary izy io dia momba ny krizin'ny vola mitranga any Zimbabwe: “Tsy afa-milaza aho tsy mbola nisy toy izay hatramin'izay. Namoaka vola misy soratra manao hoe “best before” izany hoe tsara ampiasaina alohan'ny (toy ny fanafody amin'ny ankapobeny) arahina daty ny Governemanta any. Mbolamanamarika izany hoe tahaka ny ahoana tokoa moa ny halalin'ny toe-javatra mampalahelo mihatra amin'ny fiainana andavanandro any Zimbaboe.”
Mankalaza ny faha-24 taona nijoroany ny 24 janoary ny vondron'ny mpiasa Breziliana tsy manan-tany (iasana). Namoaka sary fotsy sy mainty mahafinaritra i João Valente Aguiar [pt] ary manazava azy ho fihetsiketsehan'ny vondron'olona miady ho amina endrika fiaraha-monina hafa. Hetsika izay tratran'ny fampisamborana, fampijaliana, ary hatramin'ny famonoana ho faty matetika aza noho ny fikirizana sy ny sarangam-piarahamonina misy ireo mpiasa ireo.”